UKUFUMANA ISEMTHETHWENI INGCEBISO
UKUZE UFUMANE INGCEBISO ISEMTHETHWENI
Nabaqondisi-mthetho ungafumana isemthethweni ingcebiso ukuba inikeziwe nayiphi mba kwaye na le umthetho Enetherlands ayikho dependent kwi ugqityo Yakho inquiry.
Iindleko a luhlomle kuwo kwi-ofisi zethu — ukususela. Ixabiso isemthethweni ingcebiso akusebenzi zingaphezu i-avareji kwiindawo zentengiso neenkqubo zomthetho iinkonzo. Kwimeko kwisivumelwano kunye nathi ukuze yenze imisebenzi kunjalo, isemthethweni ingcebiso ingaba simahla.
Isemthethweni icebiso kukuba ahlawulwe ngexesha ixabiso omiselwe nganye nganye, emva kokufumana abaqondisi-mthetho wethu inkampani nabo bonke kuyimfuneko i-data kuba nenkcazelo yalo.
I-data wazuza iya kugcinwa njengoko ziyimfihlo ulwazi, ezifumanekayo a limited inani specialists kwaye isetyenziswa kuba enye injongo, yayikukwenza ukuhlola umsebenzi.
I-Oral isemthethweni ingcebiso, njengokuba umthetho, omnye umbuzo impendulo leyo ifuna hayi ngaphezulu kwe- yure. Iindleko esibhaliweyo luhlomle kuwo izimisele kwimeko nganye ngokusekelwe ugqityo ka umbuzo okanye uhlobo ingxaki, deadline ukusuka kwelinye ukuya ezimbini zomsebenzi ukususela ngomhla we-isivumelwano kwaye intlawulo.
Ixabiso kuxhomekeke ugqityo ka-lo mba, amaxwebhu ka-france (verbal, esezantsi esibhaliweyo okanye oluneenkcukacha yokubhala — izimisele kunye umxhasi), inani imibuzo, ixesha umda ngaphakathi apho Ufuna ukufumana iingcebiso, ngokunjalo nezinye iinkalo ezibalulekileyo.
Isemthethweni i company unikezela ingxelo enye inkonzo — departure ye-lawyer ukuze yenze imisebenzi oral iintlanganiso zokubonisana kwi isemthethweni imiba, ngokunjalo ukufumana ulwazi kwaye amaxwebhu ukuba kuyimfuneko.
Inkonzo ibandakanya i-departure ye-lawyer yakho ofisi, ekhaya, njalo-njalo
Free Isemthethweni Uncedo Military